Tweets-ka anti-Semitic-ga ayaa bartilmaameedsanaya finalka Miss France - teles relay
Tweets-ka anti-Semitic-ga ayaa bartilmaameedsanaya gabagabadii Miss France
Dhameystirka tartanka Miss France 2021 waxaa lagu soo qaaday mowjado ceeb ah oo ka dhan ah Yuhuud nacaybka ee baraha bulshada, dhiirrigelinta caro iyo baaritaanka booliska.
Abriil Benayoum, oo 21 jir ah, ayaa gashay kaalinta labaad ee tartanka xaflad telefishanka laga daawanayay Sabtidii.
Waxay shaaca ka qaaday asal ahaan reer Israel wareysi ay ka bixisay dhacdadaas, taasoo horseeday weeraro ka dhan ah Yuhuud naceybka oo lagu soo qaaday barta Twitter-ka
Tweets-ka waxaa si weyn u cambaareeyay siyaasiyiinta Faransiiska iyo kooxaha Yuhuuda.
Wareysi ay siisay wargeyska Var-Matin, Ms. Benayoum waxay ku sheegtay inay maqashay cayda ka dhanka ah Yuhuudda ee ehelkeeda.
"Waa wax laga xumaado in la arko dabeecadaha noocaas ah sanadka 2020," ayay tiri Ms. Benayoum, oo ku matashay gobolka koonfur-bari ee Provence tartanka. “Waxaan si cad u cambaareynayaa erayadan, laakiin aniga waxba iima dhimayo. "
Wasiirka Arimaha Gudaha Faransiiska Gerald Darmanin ayaa sheegay inuu "aad uga naxay roobka aflagaado nacaybka Yuhuud naceybka ah" ee lagula kacay Ms. Benayoum. "Waa inaanu sii deynin," ayuu ku qoray qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, isagoo intaas ku daray in booliisku ay fiirinayeen qoraallo aflagaado ah.
HalyeeygaMiss Normandy Amandine Petit (D) waxay ku guuleysatay taajka Miss France 2021 iyadoo Miss Provence April Benayoum (L) ay ku dhameysatay kaalinta labaad
Abaabulayaashii tartanku waxay canbaareeyeen "hadal nacayb ah" oo lagula kacay Ms Benayoum, iyagoo sheegay inay "gebi ahaanba ka soo horjeeddo qiyamka kanaalka, soosaarka iyo bandhigga".
Miss France 2021 waxaa loo dabaaldegay inay tahay daabacaaddii boqol jirsatay ee tartankan, oo uu aasaasay 1920 wariye Maurice de Waleffe.
Amandine Petit, ama Miss Normandy, ayaa loo caleemo saaray guuleystaha sanadkan, iyadoo garaacday goob ay ku tartamayeen 29 tartame si ay ugu guuleystaan ​​abaalmarin lacageed, adeegsiga aqal ku yaal Paris, iyo mushahar bille ah sannad. Waxay u sheegtay BFM TV in "hadalada aan munaasibka ahayn" ay "aad u niyad jabeen" in la daawado.
Sidoo kale siyaasiyiintu waxay muujiyeen isku duubnidooda. Wasiirka jinsiyadaha Marlène Schiappa ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qortay in tartanka quruxda "uusan ahayn tartan ka dhan ah Yuhuudda".
Renaud Muselier, oo ah xubin hore oo Faransiis ah oo ka tirsan baarlamaanka Yurub kana soo jeeda gobolka Provence, ayaa ku tilmaamay weerarada "wax karaahiyo ah". Wuxuu carrabka ku adkeeyay in Ms. Benayoum ay ahayd "Faransiis, asal ahaanna ka soo jeeda Talyaaniga iyo Israail, kana timid Provence, koonfurta", taas oo macnaheedu yahay inay "si buuxda u metelayso gobolkeenna iyo waddankeenna"
HalyeeygaMs.Benayoum ayaa sheegtay inay tahay "wax laga xumaado in la arko dabeecadaha noocaas ah sanadka 2020"
Waxaa sidoo kale jiray fal celin xoogan oo ka timid kooxaha Yuhuuda. International League Against Racism and Anti-Semitism (Licra) ayaa sheegtay in tartanka Miss France uu "Twitterka u rogay cesspool naceyb ah oo ka dhan ah Miss Provence".
Faransiiska oo ay ku noolyihiin tirada ugu badan ee Yuhuudda ah ee ku nool Yurub qiyaastii nus milyan, ayaa waxaa ka dhacay dhowr weerar oo looga soo horjeeday Yuhuudda sanadihii la soo dhaafay. Dowlada faransiiska ayaa la kulantay cadaadis ah inay ka jawaabto rabshadaha iyo dhibaateynta kaga imaaneysa yuhuuda ku sugan dalkaasi.
Daraasad laga sameeyay wadamada Midowga Yurub sanadkii 2018 ayaa lagu ogaaday in 95% Yuhuudda Faransiisku ay u tixgeliyaan neceyb naceyb dhibaato cadaalad ah ama aad u muhiim ah. Isla sanadkaas, Raiisel Wasaarihii hore ee Faransiiska Édouard Philippe wuxuu sheegay in 69% ay kordheen dhacdooyinka ka dhanka ah Yuhuuda.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii ugu horreysay: https://www.bbc.com/news/world-europe-55389153
'Zombie Angelina Jolie' 10 sano ayey ku xirneyd Iran - Video
Gabar Angelina Jolie ah oo lagu xukumay 10 sano oo xarig ah been abuur - Video